Ndozi na ọgụgụ isi Onwe-arụ ọrụ | Martech Zone
Ndozi na Izi Onwe Onye nke Iche
Tọzdee, Septemba 27, 2012 Wednesday, September 26, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị dị ka m, ị na-eleda mmekọrịta ndị ahịa anya. Ọ bụghị na enweghị m mmasị na ndị mmadụ - ha na-eme ike ha niile. Ma ọtụtụ mgbe, anaghị m ama nsogbu m na-ese karịa ha. Achọghị m ịnọdụ ala na ekwentị ijide 5 nkeji, mkparịta ụka maka 15 nkeji, na-esote ịrị elu na nchekwube na nkọwa.
Imirikiti okwu m na-edozi onwe m, ma ọ bụ m tụgharịa na netwọkụ m iji nyere m aka. Ndị ahịa kachasị mma, n'echiche m, bụ ezigbo ihe ọmụma ma ọ bụ Ajụjụ m nwere ike iji onwe m rụọ ọrụ. Aga m eji ọkara ụbọchị na-achọ azịza kama ịtụtụrụ ekwentị ọjọọ ahụ. Ọ dị ka ndị ọzọ kwenyere.
Kedu ihe kpatara anyị ji ekwu maka ọrụ ndị ahịa na a Blog ahịa? Usoro mmekọrịta ọ bụla na-amalite site na nkwado ọrụ onwe onye. Mgbe ị naghị enye ngwaọrụ ndị ahịa gị na-achọ, ebe mbụ ha na-eme mkpesa bụ ntanetị. Mkparịta ụka ahụ na-adịghị mma nwere ike iri ihe kacha mma ahịa mkpọsa!
Foto izizi biputere na Zengage, Zendesk Blog
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa nkwadoinfographicịrụ ọrụ onweOnyebuchi
Na-akwado Nkwado na-enweghị Ere Mkpụrụ Obi gị
7 Surefire Atụmatụ maka Courting A Ọbịa Blog Post